ဘီဘီစီ | Myanmar Echo
Home Tag ဘီဘီစီ
Mandalay – women’s strike aimed at reversing all setbacks – BBC News Burma
- ကျောင်းသူ၊ ဆရာဝန်၊ ဒီဇိုင်နာ၊ ရှေ့နေ နယ်ပယ်စုံက မန္တလေးသူတွေရဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ - ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့ကို ပုဒ်မတပ် တရားစွဲတာကို စစ်တွေ တရားရုံးမှာ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ခဲ့လဲ။ အမှုအကြောင်း ရှေ့နေနဲ့ ...
Can strikes continue despite military junta repression? BBC News Myanmar
စနေနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ (၂၁ သြဂုတ် ၂၀၂၁) စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြားက သပိတ်တွေ ရေရှည် ဆက်ရှိနိုင်မလား။ အာဆီယံ ကြိုးပမ်းချက်ဟာ မျှော်လင့်ထားသလောက် ထိရောက်မှာ မဟုတ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးပြော။ ရခိုင်မှာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ...
More than 200 student unions call for non-recognition of coup d’etat. BBC News Burma
စနေနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ (၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁) အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုဖို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၂၀၀ကျော်က တောင်းဆို။ နိုင်ငံပေါင်း၂၀က မြို့ ၄၀ကျော်မှာ နိုင်ငံတကာက NUGကို အသိအမှတ် ...
Soldier loses limb trying to disarm Yangon car bomb: witnesses